तिहारमा धमाधम पक्राउ पर्दै जुवाडे, कस्तो छ कानुनमा सजाय? - Everest Dainik - News from Nepal
तिहारमा धमाधम पक्राउ पर्दै जुवाडे, कस्तो छ कानुनमा सजाय?
२०७६, ११ कार्तिक सोमबार
काठमाडौंः देश तिहारको उत्सवमा रमाइरहँदा जुवातास खेल्नेहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
पछिल्लो १० दिनमा देशभरीका ३१ स्थानबाट जुवातास खेल्ने र खेलाउने कार्यमा संलग्न तीनजना महिलासहित तीन सय २९ जना पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वराज पोख्रेलका अनुसार जुवातासको खालबाट तीन करोड पाँच लाखभन्दा बढी रकम बरामद भएको छ।
कार्तिक १० गते सबैभन्दा बढी ९२ जना पक्राउ परेको र धेरै घटना काठमान्डूमा भएका छन्।
बाजुरा, कास्की, दाङ र पाल्पा जिल्लामा पनि जुवा खेलिरहेका अवस्थामा केहीलाई पक्राउ गरिएको छ।
यसरी पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको र मुद्दा चलाइने प्रहरीले बताएको छ ।
यो वर्ष धेरै कि थोरै?
जुवातास खेलिरहेको स्थानको खोजी गर्न देशैभर सादा पोशाकमा प्रहरीहरू परिचालन गरिएको प्रवक्ता पोख्रेलको भनाइ छ।
सादा पोशाकका प्रहरीले सर्वसाधारणको सूचनाका आधारमा पक्राउ गर्ने गरिएको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जुवातास खेल्ने खेलाउने कार्यमा संलग्नविरुद्ध दुई सय छवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सो वर्ष १५ सय चारजना पक्राउ परेका थिए।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन सय ५९ वटा मुद्दामा २८ सय २४ जना पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन सय ९१ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २८ सय ६९ व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।
के सजाय हुन्छ?
जुवातास खेल्ने खेलाउने कार्यलाई नेपालको कानुनले अपराधमा राखेको छ।
नयाँ अपराध संहिता लागु हुनु अगाडि सजायको व्यवस्था निकै कम भएको र त्यसले जुवातास नियन्त्रण नहुने धेरैको मत थियो।
जुवा ऐन २०२० अनुसार जुवा खेल्दा वा खेलाउँदा पहिलोपटक पक्राउ परे दुई सय रुपैयाँ जरिबाना र दोस्रोपटकदेखि भने बढीमा नौ महिना कैदको व्यवस्था थियो।
तर २०७५ साल भदौदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहितामा जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई सजाय बढाइएको छ।
उक्त संहिताको दफा १२५ मा पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ।
दोस्रो पटकमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिबाना तोकिएको छ।
दोस्रो पटक सजाय भुक्तान गरेर पक्राउ परेमा हरेक पटक थप तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
जुवा खेल्न प्रयोग भएको साधन र जुवा खालमा प्राप्त सम्पुर्ण चलअचल सम्पत्ति जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर जुवा खेलेको घर वा कोठा वा ठाउँ वा सवारीसाधन भने जफत हुँदैन। स्रोतः बीबीसी नेपाली
बार्सिलाेना र चेल्सीसहित ४ टाेली नकआउट चरणमा प्रवेश
अन्योललाई चिर्दै कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूर्ण र सहज तरिकाले सञ्चालन
रामेछाप सेवा समाजद्वारा मिर्गौला पीडित तामाङलाई आर्थिक सहयोग
बजारमा आउने बित्तिकै ‘कोरोना खोप’ ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
सास फर्ने गाह्रो भएपछि मन्त्री लामालाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लगियो
कक्षा १२ को परीक्षा सन्तोषजनक : शिक्षामन्त्री पोखरेल
१/२ कर्मचारी संक्रमित हुँदैमा सेवा बन्द नगर्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन
भारतद्वारा थप ४३ मोबाइल एपमा प्रतिबन्ध, धेरैजसो डेटिङ एपहरु
सबै देशमा उडान अनुमति दिने सीसीएमसीको निर्णय
यस्ता पो नेताः चौथौपल्ट फेरी सर्वाधिक मतले विजयी, तर अझै बस्छन् झुप्रोमा
‘आईसीसी एशोसिएट प्लेयर अफ दि डिकेट’ अवार्डको मनोनयनमा पारस खड्का